Ololaha Talalka Xoolaha Ayaa ka Bilowday Degmooyinka Filtu iyo Dolo-ado Ee gobolka Liibaan - Cakaara News
Filtu,Dolo-AdoCakaaraNews) Isniin Nov,11,2013.Sida wariyaha Cakaaranews ee ku sugan Gobolka Liban uu ku soo waramayo waxaa si habsami leh uga biowday Gobolka Liibaan gaar ahaan Degmooyinka Filtu iyo Dolo-ado talaalka iyo dawaynta Xoolaha ishkinka ah.
Warka ayaa waxa uu intaa ku darayaa in mar uu wariyaha cakaara ku sugnaa goobaha Talaalkani ka socdo kula kulmay madaxa Xafiiska Xoolaha beeraha iyo Horumarinta Reer-miyiga ee Degmada Filtu Mudane Maxamed Nuur Yuusuf una sheegay in talaalku uu kasocdo Dhamaan tulooyinka Hoos yimaada Degmada filtu.
Masuulkan ayaa tibaaxay in Talaalkani yahay mid looga hortagayo cudurada faafa ee ku dhaca Adhiga Riyaha iyo Idahaba,islamarkaana ka sakow talaalka la baadhayo Guud ahaan caafimaadka xoolaha lana siinayo Daawayn ayuu yidhi. Dhanka kale Degmada Dolo-ado ayaa iyana waxa kasocda talaalka iyo daawaynta lasiinayo Adhiga iyadoona uu warku nagu soo gaadhayo in uu Madaxa Xoolaha Beeraha iyo Horumarinta Reer miyiga Ee degmada Dolo Ado Mudane Nuur Maxamed faarax uu Wargaleenada Cakaaranews u sheegay in talaalkan looga faaiideeyay xoolo dhan 28,000(Labaatan iyo Sideed Kun) oo Neef oo Adhi ama Ishkin ah.
Isku soo wada soohoo warka ayaa intaa ku ladhaya inTalaalka iyo Daawooyinka lagu Fulinayo barnaamijkan Ololaha ah in laga Helay Xafiiska Xoolaha Beeraha iyo Horumarinta Reer-miyiga Ee DDSI Kaasoo markasta Tageero Dhinaca Dawada iyo Qalabka siiya Xafiisyda xoolaha ee Degmooyinka si loo helo Xoolo Caafimaad qaba Oo ka tartama Suuqa Caalamka